XAQIIQADDA DHABTA AH EE CAAFIMAADKA HARGEYSA IYO BERBERA.
Tuesday August 13, 2019 - 09:08:05 in Maqaallo by Wariye Tiriko
XAQIIQADDA DHABTA AH EE CAAFIMAADKA HARGEYSA IYO BERBERA. Bishii hore dabayaaqadeedii ayay gabadh yar ugu dhalatay walaashay cisbitaalka Berbera. Shan cisho markii ay jirtay ayay dhakhaatiirta Berbera yidhaahdeen "Waxba uma qaban karno ee Hargaysa hala geeyo". Waa la qaaday oo dhakhtar Talyaani lee yahay oo Hargaysa ay ayaa la geeyay, cuntii iyo cabbitaankii ayuu dhammaanba ka jaray, tobban dhiig oo kala nooc ahna wuu qaaday, dhowr komputer oo kala duwana wuu saaray. Intaa kadib ayuu yidhi "Dhakhtarka Gargaar geeya".
Gargaar ayaa isna shiigag kala duwan ka qaaday, oo isna computaro badan oo wada qaali ah saaray. Maalin kadib ayaa dhakhtarka weyn ee Hargaysa oo qolo Ruush ah joogto la geeyay, kadib markii la tusay waxay sheegeen inay qaliin degdeg ah ku samaynayaan balse intaa ka horaysa in dhiigaga laga soo qaado. Maadaama aysan muddo isbuuc ah cunto iyo cabbitaanba afka saarin waxa hore looga waayay dhiig badan, waxa ay qaadatay laba cisho in qolyaha shaybaadhku maalinba galin la ballamaan. Ugu danbayn waa laga saaray markii ay waxba u qaban waayeen, waxaana lagu celiyay Gargaar Hospital.
Dhakhtar Gargaar jooga ayaa qaliinkii sameeyay, dhowr saacadood oo uu gudaha kula jiray kadib ayuu af qalalan nagula soo noqday "Waan qalay, waxbana waan ka qaban kari waayay, kadib dib ayaan idiinku tolay" wax lala yaabbo ayay noqotay. Xitaa haddii aan waxba laguu qaban karin Hargaysa, inta lacagta lagaa qaato ayaa lagu odhanayaa "Waxba laguuma qaban karo".
Iyada oo sidii u qalan ayaa waadhka lagu soo celiyay, cunto iyo cabbitaana lama siin karo ayaa la yidhi, aan ka ahayn faleembo, inta ay wax iska beddelayaan. Shan cisho ayay u qabteen inay waadhka taalo, kadibna dib loo celiyo. Shalay ayaan ku soo celinay Cisbitaalka weyn ee Berbera, 24 saacadood oo ay taalay cid faleembo ku xidha ayaa loo laayaya haddii aan idinku yidhaahdo miyaad iga rumaysanaysaan? Hadda oo aan dusheeda taaganahay suuqa ayaan dhakhtar ka raadinaynaa Kaanoole noogu xidha. Waa ilmo yar oo dhowr iyo tobban cisho jira, oo qalan, oo afka aan waxba loo saarin in ka badan 24 saacadood.
Cabdiraxmaan Maxamed Axmed "Warmoogeh"
Tell:- 063 4443752